REENOEMANN: ဗွေ ပေါက်ရောက်ရာ (ခရီးရှည်)
ဗွေ ပေါက်ရောက်ရာ (ခရီးရှည်)
ခြေထောက်မှာ ဗွေပါခဲ့တာကို ငယ်ငယ်တုန်းက သတိမထားခဲ့မိပေမဲ့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်ခြေထောက် ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အထိ အဖြစ်ပါ။ အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ်ကြည့်လိုက်တော့လည်း အမေ့ဝမ်းထဲမှာ နေစဉ်ကတည်းက ဗွေပါခဲ့တာကို သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ နေရာ အခြေတကျ မရှိတဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ ဗွေဆိုတာ ဘာအကောင် ကြီးလည်းလို့ ပြန်မေးရမဲ့ အဖြစ်ပါ။
အမိဝမ်းမှာနေတုန်းကလည်း ငြိမ်ငြိမ် မနေခဲ့သလို့ ဝမ်းကထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်တော့လည်း အမိကိုပါ ဗွေပေါက်ခိုင်းတဲ့ အဖြစ်နဲ့ပေါ့။ တောင်ငူ၊ ဖျာပုံ၊ ပုသိမ်၊ ခန္တီး၊ ပင်လောင်း၊ မြိုင်ကလေး ဆိုတဲ့ နေရာတွေက နှစ်ရှည်လများ ဗွေပေါက်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးတွေပဲပေါ့။ ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ မြို့တော်ကြီးမှာလည်း ငါးနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန် ကြာခဲ့ပေမဲ့ တစ်နေရာတည်းမှာ ကြာကြာမနေတက်တဲ့ ဒီဗွေကြောင့်ပဲ ၉မိုင်ခွဲ၊ သာကေတ၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်း၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ၁၆၅လမ်း တာမွေ၊ စမ်းချောင်း၊ မြောက်ဒဂုံ ဆိုတဲ့ နေရာတွေမှာ ဗွေ သဘောကျ သွားလာနေထိုင်ခဲ့တယ်။
ကျေနပ်နေပြီးလာလို့ မထင်လိုက်နဲ့။ ဗွေက တော်တော် ခြေဆန့် ချင်နေသေးတာလေ။ ဒီလောက်တောင် ဖြစ်လှတာ ဆိုပြီး လွှတ်ပေးလိုက်မိတာ။ သုံးနှစ်လောက် မလေးရှားကို ရောက် သွားခဲ့တယ်။ သုံးနှစ်ပြည့်တော့ သူ ငြီးငွေ့နေပြီထင်ပါတယ်။ ပြည်တော်ပြန် ခဲ့တာ တစ်နှစ်လောက် ကြာတော့ ဗွေပေါက်ဖို့ အရေး တွေးကာငေးလို့ ဟောဒီ ကျွန်းသေးသေးလေးပေါ်ကို ရောက်လို့ လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ခု ၂နှစ်ပြည့်တော့ သူက တစ်မျိုး ဗွေဖေါက်လာပြန်ပါတယ်။ ဟိုး.. ဘာလဲ ဖြူသီဆိုတဲ့ သီချင်းကို အားကျလို့နဲ့တူပါရဲ့ ( အင်ဒိုနီရှား ပိုလာဘာလီ ကျွန်းလေးဝယ် သူနဲ့လည်း တွေ့ လို့ ချစ်ကြိုးသွယ်)။ သူဗွေ ပေါက်တာ အရေးမကြီးဘူး။ သူ ဗွေပေါက်ရာ ကျွန်တော်က လိုက်နေရတော့ လည်း ပိုက်ပိုက်ကုန်တယ်လို့တော့ မငြီးတော့ပါဘူး။ နေရာ အသစ် ဒေသအသစ်ကို ခံစား သိခွင့်မြင်ခွင့်ရလိုက်တယ်လို့ပဲ တွေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတည်း မောင်နှမအားလုံးကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ကံမကုန်သေးလို့ ပြန်ဆုံ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဇွန်လ နောက်ဆုံးအပတ်ထဲ ပြန်ရောက်ဖြစ်ပါမယ်။ အဲအခါကျ မှပဲ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအုံး စို့ ..............
ခုဒီ ပို့စ်လေးကို တင်လိုက်တဲ့ အချိန်ဆိုရင် ကျွန်တော် လေဆိပ်ကိုရောက်နေပါပြီ။ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်ဗျာ။
Posted by Ree Noe Mann at 8:00:00 AM
အတွေ့အကြုံသစ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ ..း))
လျှောက်သွားရတာ ပျော်စရာကြီးပါ နော့်...
နေထိုင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ပါ။
တော်ကြာ ထိန်းထားတဲ့ ဘော်ဒီလေးကျသွားပါဦးမယ်။
ကိုယ့်စကားနားထောင်ပြီး တော်ကြာ ယောကျားတွေကို ကပ်နေဦးမယ်။ ဟီးးးးး
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာ လွမ်းရင်းနဲ့သယ်ရင် အကြောင်းပြောနေကြမယ်ဆိုတာ အမှတ်ရပြီးအလွမ်းဖြေပါ။
0_0 ... ၁၆၅ လမ်း တာမွေ??
နေရာစုံရောက်ဖူးတော့ အမျိုးစုံသိခွင့်ရတာပေါ့ မောင်လေးရယ်။ ရောက်တဲ့ နေရာမှာအဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါစေရန်တောင်းဆုပြုပါတယ်။အင်ဒိုမလေးတွေက ချောတယ်နော်။ ခွာချနေရတယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုတာကြိုသိပြီးသားးp
Haveasafe and nice trip, bro.
ရတနာထုပ်တွေ တွေ့တဲ့ ဗွေမျိုးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ။။
ကိုရီနိုရေ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ခရီးလေးဖြစ်ပါစေရှင်...
ဘလော့ဂါတွေ ခရီးသွားဖို့နှုတ်ဆက်တဲ့ ပိုစ့်တွေအများကြီးထဲမှာ ဒီပိုစ့်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ...
အလည်သွားတာလား... ကောင်းတယ်.. ဗွေက ပေါက်ချင်တိုင်း ပေါက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး... ပေါက်တဲ့ ဗွေနောက် စိတ်ရှိတိုင်းလိုက်နိုင်တာ ကံကောင်းတာပဲ... ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ဗွေပေါက်ရာမှာ ဗဟုသုတတွေလည်း ရှာမှီးခဲ့ပါအုံး။ ပိုစ့်တင်ဖို့လေး)))
နောက်ထပ်လည်း ကမ္ဘာပတ်နိုင်ပါစေ။းP